I-EN877 Frey Umbhobho we-Grey Cast I-Grey Cast, abaThengi-China i-EN877 I-Grey Cast I-Iron Pipe Abavelisi
Wamkelekile kwiwebhusayithi yethu!
Inkxaso ye-imeyile plumbingsales01@sjzmetal-electric.com
Inkxaso yomnxeba 0086-13833199589
I-EN877 imibhobho ye-Grey Cast Iron
I-EN877 I-Grey Cast Iron Fittings
Izibambiso zeNtsimbi engenanto
I-ASTM A888 Hubless Cast Iron Pipe
I-ASTM A888 Hubless Cast Iron Fittings kunye neeDrains
I-EN545 598 Imibhobho yeDuctile kunye neFitanged Fittings
Isigqubuthelo seManhole kunye nemigcobo, nguGully
Izinto zokuGqobhoza i-Stainless
I-EN877 SML Hubless Cast Iron Pipe
I-ASTM A888 Hubless Cast Iron Soil Pipe
I-Ductile Iron Fitting
Isembozo se Manhole kunye nesakhelo
I-SML no-hub yaphosa imibhobho yesinyithi yentsimbi kunye nokufakwa kwezixhobo kuhlangabezana nomgangatho we-BSEN877, DIN19522, ISO6594. Ezi zixhobo zi-100% ezinokuphinda zisetyenziswe kwaye zinokuphinda zisebenze, ngesandi esiphantsi sokuhambisa, ubungqina bomlilo, ubungqina obuvuzayo kunye nokuchasana nezinto ezonakalisayo. Zisetyenziselwa ngokubanzi ukufudusa amanzi kwizakhiwo, amanzi, inkunkuma kunye nephephetha. Kananjalo isisterm yamanzi emvula efakwe ngaphandle kwezakhiwo kunye nenkqubo yokungcwaba phantsi komhlaba inokubonelelwa.
I-EN877pipes zangaphandle zokupaka zibomvu, zibomvu ngokungqingqwa okungaphantsi kwama-70um. Ngaphakathi kokudibanisa iyi-resin epoxy resin enobunzima be-120um. Okanye ngaphakathi nangaphandle ngaphezu kwe-120μm yomgubo we-epoxy odibanisa umbala obomvu.
Ezi fakelo zibomvu ngaphakathi nangaphandle, i-epoxy resin engaphezulu kwe-70um, kwaye i-epoxy yomgubo ingaphezulu kwe-120um ubukhulu.
I-EN877 BML Hubless Cast Iron Pipe
Imibhobho yokuhambisa amanzi yeBML yenkqubo yokuntywila kwebhlorho.
Ngaphandle kwendawo yokudibanisa: Imibhobho ye-BML ithwala i-zinc zinc enamathela ubuncinci bama-40um ubukhulu (290g / ㎡), ngaphezulu koko iya kutshiza isilivere epoxy resin coating ubuncinci i-80um.
Ngaphakathi kokudibanisa yindawo efanayo ye-epoxy resin i-120um efanayo nombhobho weSML.
I-EN877 KML Hubless Cast Iron Pipe
Umbhobho wokuhambisa amanzi we-KML kunye nezinto ezifanelekileyo zisetyenziselwa amanzi anenkunkuma enamanzi eekhitshi zobungcali kunye nezixhobo ezifanayo.
Ngaphandle kwento yokugibisela: Thwala intsholongwane yokufafaza ngokudibeneyo yobuncinci be-minergg / ㎡, kwaye ngaphezulu kwesigqubuthelo se-epoxy sobuncinci be-70um.
Ngaphakathi kokubengezela kukho i-echexy enemibala e-orche.Ukuphinda kabini kwe-resin epoxy enobubanzi bomaleko obungama-240um.
Ukufakwa kwe-KML kudityaniswa ngaphakathi nangaphandle nge-epoxy esemgangathweni ekumgangatho ophantsi oyi-120um.
I-EN877 TML Hubless Cast Iron Pipe
Imibhobho yokuhambisa amanzi ye-TML isekwe kwi-EN 877, ukuba ukusetyenziswa kwemibhobho ye-SML kufakelo olungaphantsi komhlaba.
Ngaphandle kwento yokugabha: Imibhobho ye-TML ithwala isiphatho sokudiza nge-zinc kunye noxinzelelo lwe-130g / ㎡, ngaphezulu koko kukho ingubo emdaka okanye ebomvu.
Ngaphakathi kwento yokudibanisa: Umbala ngumbala we-orche, epoxy 120um.
Ukulungiswa: Ebomvu bophahla bomgubo lubomvu, yi-120um ubuncinci.
BS4622 437 416 Grey Iron Pies
Umbhobho we-Grey Iron kunye ne-Spigot Pressure kudala waqeshwa ngumzi-mveliso wokwakha njengenkqubo yokuhambisa amanzi enokuthenjwa. Ngokuhambelana nomgangatho we-BS4622, BS437 kunye ne-BS416. Imibhobho yesinyithi engwevu yenziwa ngentsimbi ye-centrifugal ekubunjweni kwesinyithi, Lo mgaqo uya kuba ngumphunga okanye umnyama.
I-BS4622 i-Sinle Spigot yaphosa intsimbi yokuhambisa amanzi ngentsimbi etyibilikayo edibeneyo, DN100-DN700, Ubude: 1830mm, 4110mm kunye no-5120mm
I-BS437 i-Sinle Spigot yaphosa intsimbi yombhobho wesinyithi ngokudibeneyo kwindandatho yerabha. DN75-DN225 ubude 1830mm + -5mm
I-BS416 i-Spigot eyodwa yentsimbi yentsimbi yokuntywila ipayipi D50-DN150
1.Umgangatho Wamandla> 150 N / mm2
I-2.Hydrostatic Pressure (ibha 3.45 ye-15 sec.)
Shijiazhuang Jipeng Ngenisa kunye noThumelo ngaphandle, Co, Ltd.
Imibhobho ye-SML, iziqwenga kunye neenkqubo zokudibanisa ...
Isimbi yentsimbi yeyona nto iphambili kwizinto ezenziwa ...
Iirhasi ezikhethekileyo: Zintoni kwaye nini ...
Ngaba uyikhathalele indalo?
Iimpawu zombhobho wesinyithi